शैक्षिक खबर – Page7– rastriyakhabar.com
के गर्छन् त नेताका छोराछोरी ??? यसरी हेपीदै छ नेपाली शिक्षा हेर्नुस !
आइतवार, बैशाख ३१, २०७४ मा प्रकाशित
वृद्धाश्रममा- शिक्षकदेखि डाक्टरसम्मका बा–आमा – हेर्नुहोस यस्तो छ वास्तविकता
शुक्रबार, बैशाख २९, २०७४ मा प्रकाशित
बैशाख २५ बाट प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ का विद्यालय बन्द
काठमाडौ । यहि बैशाख २५ गतेबाट स्थानीय तहको पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३४ जिल्लाका सवै शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन एक साताका लागि बन्द हुने भएको छ । बैशाख २५ बाट प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ का विद्यालयको मात्रै पठनपाठन बन्द हुनेछ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको समयमा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन..
शिक्षकको तलव भत्ताको लागि मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ
मङ्लबार, बैशाख १२, २०७४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । शिक्षा विभागले आगामी आर्थिक बर्षमा शिक्षकको तलव भत्ताको लागि मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको खबर आजको कारोबारमा छ । चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा यो प्रस्ताव २ अर्ब ९६ करोडले बढी हो । आगामी आवमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ९एसएसडीपी० र शिक्षक तलव भत्ताका लागि मात्र साढे ५ अर्ब..
रिमिक्षा, सम्पदा र सान्द्रालाई ‘लिटिल स्टार २०१७’को ताज
काठमार्डौं । ‘लिटिल स्टार २०१७’को उपाधि रिमिक्षा रेग्मी, सम्पदा सत्याल र सान्द्रा बुढाथोकीले जितेका छन् । कोलम्बस स्कुलकी रिमिक्षाले स्मल, काठमाडौ बिद्याकुन्जकी सम्पदाले मिडिल र रुपिज स्कुलकी सान्द्राले बिग तर्फको उपाधि जितेका हुन् । शिर्ष विजेता तीन सबैलाई रुपिज स्कुलकी निर्देशक रुपिज सिंह र..
स्कुल र स्टेसनरीको डरलाग्दो कनेक्सन : हैरान छन् अभिभावक
बुधबार, बैशाख ६, २०७४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले विद्यालयबाट पुस्तक विक्रि गर्न नपाइने भनेपछि स्टेसनरी व्यवसायीको मनोमानी बढेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । विद्यालयको मिलेमतोमा पुस्तक व्यवसायीले एउटै पसलबाट पुस्तक लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । राजधानीमा नाम चलेका विद्यालयले एउटै पसलमा सूची भिडाएर..
गल्ती नै गल्ती भएको पुस्तक : त्यही पुस्तक पढाउन प्याब्सनको दबाब
मङ्लबार, बैशाख ५, २०७४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनले धेरै त्रुटि रहेको ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन सदस्य विद्यालयहरूलाई दबाब दिएको छ । प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले एसएमएस, भेटघाटमा आफैँले प्रकाशन गरेको ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन दबाब दिएका हुन् ।‘प्याब्सन साइन्स बुक’ मा धेरै त्रुटि पाइएपछि..
अदालतको आदेश लत्याउँदै निजी विद्यालय आफूखुसी शुल्क उठाए
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लत्याएँदै निजी विद्यालयले सरकारी निकायकै मिलेमतोमा आफूखुसी शुल्क उठाउन थालेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । २०६९ जेठ १० मा न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन बर्षसम्म बढाउन नपाउने परमादेश जारी..
यसरि लुट्दै नीजि विद्यालय, सरकारी निकाय रमिते : मन्टेश्वरीकै शुल्क एक लाख पचास हजार सम्म
काठमाडौँ,१ बैशाख । आजको जन आह्वान साप्ताहिकमा यो खबर छ । सरकारले ध्यान दिन नसक्दा अभिभावक यस वर्षमा पनि ठगीमा पर्ने भएका छन् । सरकारी बेवास्थाका कारण नीजि विद्यालयले अभिभावकलाई खुलमखुल्ला ठगी गर्नका लागि वातावरण पैदा गरेको छ ।अभिभावक लुट्नेमा सबैभन्दा बढी एमाले निकटका विद्यालय बढी रहेका छन् ।..
शैक्षिक शत्र सुरु हुन केहि दिन बाँकी हुदा कहिले तोकिन्छ निजी विद्यालयको शुल्क ?
मङ्लबार, चैत्र २९, २०७३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । शैक्षिक शत्र सुरु हुन तीन दिन मात्र बाँकी रहे पनि उपत्यकाका निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्कको सीमा विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन । सरोकारवाला निकायले निर्णय गर्न नसक्दा शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यालय सञ्चालकले मनपरी शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् ।..
बिधालय कार्यक्रममा प्रियंका अर्धनग्न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिकै बिरोध
सोमवार, चैत्र २८, २०७३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सूर्योदय एजुकेशन फाउण्डेशनद्वारा सञ्चालित एस.ए.बी. पब्लिक स्कुल डिल्लीबजारको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी नायिका प्रियका कार्कीको गेटअपले गर्दा अभिभाबले बिरोध गरेका छन । बिधालयको प्रागणमा भएको कार्यक्रममा प्रियंका निर्धारित समय भन्दा डेढ घण्टा ढीलो अर्धनग्न अबस्थामा..
सिकाइ केन्द्रका प्रतिनिधि काठमाडौं आए
शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । यतिबेला खोटाङका २४ प्रधानाध्यापक र २२ स्रोतव्यक्ति काठमाडौंका राम्रा विद्यालयको अभ्यास हेर्न व्यस्त छन् । सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास कमजोर भएपछि राम्रा अभ्यासको अनुसरण गर्दै सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेर उनीहरु काठमाडौं आएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । खोटाङका जिल्ला शिक्षा..
अभिभावक आफ्ना छोराछोरीका लागि राम्रो स्कुल खोज्न दौडधुपमा
बुधबार, चैत्र १६, २०७३ मा प्रकाशित
काठमाडौं,१६ चैत्र । वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेकाले अभिभावक आफ्ना छोराछोरीका लागि राम्रो स्कुल खोज्न दौडधुपमा छन् । उनीहरूमध्ये धेरैका सन्तान कक्षा १ मा भर्ना गर्नुपर्ने उमेरका छन् । ‘छोरीलाई सेन्ट जेभियर्स वा सेन्ट मेरिजमध्ये एउटामा पढाउँ भनेर धाइरहेको छु,’ कक्षा १ का भर्ना गराउने..
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम आजदेखि खुल्ला
बुधबार, चैत्र ९, २०७३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले सन् २०१८ को कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम आजदेखि खुला गर्ने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० अन्तर्गत कामका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । कोरिया ईपीएस शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाका अनुसार बुधबार बिहान ९ बजेदेखि अनलाईन..
एकदमै टाइट ट्राउजर लगाएको आरोपमा एउटा स्कुलले ७५ जना छात्राहरुलाई घर फर्काएको छ । छात्राहरुले कसिलो ट्राउजर लगाउँदा छात्रहरु रोमाञ्चित भएको र पढाईमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको विद्यालयको दावी छ । बेलायतको वेस्ट मिडल्यान्ड्सस्थित सोलीहुलमा रहेको सिमथ वुड स्पोर्ट्स कलेजका छात्राहरुलाई..